Izitshalo ezintathu ukuyeka ukubhema kuze kube phakade - AFRIKHEPRI FOUNDATION
NgeSonto 22 Septhemba, 2019
U-Eve Mitochondrial no-Adam: Ubufakazi Bokuqala Kwamuntu E-Afrika
Imibuso yamachibi amakhulu
Izitshalo ezintathu ukuyeka ukubhema ngokuqinisekile
By I-AFRIKHEPRI FOUNDATION ngo-Septhemba 4, 2019
Kungani uyeka ukubhema?
Imiphumela eyingozi yocuba emzimbeni iyaziwa, iqoshiwe kahle futhi yashicilelwa kabanzi
- izifo zokuphefumula
- izifo zenhliziyo
- ukuguga ngaphambi kwesikhathi
- ukubhujiswa kwamangqamuzana eseli
- ukubhujiswa kwamavithamini C
- ingozi yenhliziyo yanda ngamathandathu
- ingozi yesifo sikashukela iphindwe kabili
- ukungabi namandla ...
Ingabe ugwayi we-elekthronikhi ungcono okungcono?
Ukucwaninga kwesayensi kwamagundane kusanda kubonisa ukuthi ukukhishwa kwe-high-dose ye-cigarette umphuzi we-elekthronikhi kwandisa ukuzwela kwezifo zokuphefumula futhi kukhishwa ama-radicals mahhala.
-Johns Hopkins University (Baltimore, e-USA), uSolwazi Thomas Sussan nethimba lakhe wayefuna ukwazi ukuthi amagundane wadalula electronic ugwayi intuthu babe noma cha usengozini yokuthola izifo zokuphefumula. Ukuze bathole ukuthi, babe neqembu lokuqala lamagundane ekamelweni lokuphuza. Izilwane zaphefumula i-e-cigarette fumes amasonto amabili, ngokusobala emazingeni afana nalawo okuvezwa ngabantu. Eqenjini lesibili, amagundane aphefumula emoyeni.
Ukulinganisa ezifweni emagciwaneni, ososayensi baye ihlukaniswe eqenjini ngalinye e-sub-ngamaqembu amathathu: yokuqala, amagundane wathola - nasally - amathonsi equkethe igciwane (Streptococcus pneumoniae) okubangela ephathwa inyumoniya futhi we-sinusitis. Okwesibili, bavezwa uhlobo lwegciwane lesandulela ngculazi. Ngesithathu, abatholanga amagciwane noma igciwane.
Imiphumela iyatholakala emaphepheni wePlos One. Ekugcineni, abacwaningi bathola ukuthi amagundane ayegqoke imfucuza ye-e-cigarette ayengakwazi ukutheleleka kakhulu. "Imifino ivimbela ikhono lamagundane ukulwa nokutheleleka kwamagciwane noma amabhaktheriya angene emaphashini abo," kusho uThomas Sussan. Abalobi babonisa ukuthi lezi ziphunga zikhulula ama-radicals mahhala, okungukuthi, izinto ezinobuthi ezingashintsha i-DNA.
Ngakho-ke ungayeka kanjani ukubhema?
Ukuze uthuthukise ukunambitheka kogwayi obomvu, amaqabunga kagwayi aphethwe ngoshukela kanye ne-sweeteners. Kodwa-ke, i-Gymnema sylvestres inempahla emangalisayo yokunciphisa ukuzwa komnandi. Ngokushesha, vula okuqukethwe kwe-capsule eyodwa, yishiye olimini lwe-30 imizuzwana. Amathe. Ukuhlafuna i-Gymnema sylvestres ingabuyekezwa ngaphambi kokugwaya. Ngakho-ke asikwazi ukuthola ukunambitheka okumnandi. Isifiso sokubhema sinciphisa kakhulu. I-Gymnema sylvestres, ngaphezu kwalokho, ilahlekelwa yiyo yonke inzalo yayo ekubambeni kwe-compensation. Ukuze uthole umphumela okwesikhathi eside nokugwema ukuzuza kwesisindo, gwinya amakhemikhali we-6 nsuku zonke.
Le ndoda yase-Afrika ithathwa ngokuthi "i-prozaclike". Ivuselela ama-neurotransmitters (tryptophan, serotonin). Ngenxa elwa nokudangala yayo, imbewu yalesi encane isitshalo Afrika (Griffonia simplicifolia) ugwema ukucindezeleka ezidumile uvalo noma zokukhathazeka ezingase ezihambisana ukuphahlazeka. I-Griffonia iqukethe i-5-htp, isandulela se-serotonin, ngokwayo isandulela se-melatonin. Isenzo salo ekuziphatheni nasekulala siqinisekiswe yizifundo eziningana futhi sitholakale sibe nomthelela wokunciphisa ukudla. Ucwaningo lubonisile eminyakeni embalwa eyedlule ukuthi i-serotonin ithumela imilayezo ebuchosheni ukulawula ukudla nokudla. Ososayensi basanda kugcizelela isenzo salo sokucindezeleka. Thatha amakhemikhali we-6 ngosuku.
Esinye isitshalo siphume ngaphandle kwedzu. Lesi sitshalo sibhekene nezidakamizwa zokubhema, utshwala nezidakamizwa.
Thatha izikhathi ezingu-3 ngamaphilisi we-2 nsuku zonke kanye ne-vitamin B6.
Thatha inyanga ngaphambi kokuyeka amaconsi e-10 efihlekile glycerine macerate bloody dogwood. Lokhu kuzohlanza imishanguzo.
Ngesikhathi sokuma, qala ukwelapha i-glycerine macerate glycerine ehlathini ngezikhathi ze-2 amaconsi we-10 nsuku zonke inyanga ukuxosha umzimba.
Ukuze silwe imiphumela yokuntula, ukukhathazeka noma uvalo, sebenzisa lesbourgeons glycerine macerate Linden ngenxa amathonsi ekuseni 20 15 lehla ebusuku.
I-antidote engcono kunazo zonke ekubhekeni ugwayi yiwoyela abalulekile e-Myrtle yaseMorocco. Faka isicelo se-4 kumaconsi e-5 emphinjeni kaningi ngosuku.
• Ukuze uphume noma nini
Hlanganisa izingxenye ezintathu ze-lemon essence (ezingcolile) nengxenye eyodwa ye-Helichrysum Italian HE, eyaziwa nangokuthi i-immortelle. Gcina ingxube ebhodini elincane, elithwala kalula. Bhala njalo lapho unenkinga yokunqoba umuzwa wokuntula.
Beka 1 Iconsi ngalinye ET: sassafras, sage, geranium, marjoram, lavender endaweni ziwuthenga ngezipuni uju noma ingilazi enkulu yamanzi afudumele nge dash of Mint isiraphu, wakhonza ice cubes, izikhathi 3 ngosuku.
Ukwehlukaniswa emkhathini wengxube: i-verbena + i-geranium + iphayini + yemisedari, iningi elinganayo, ukuphefumula ubusuku bonke noma okungenani amahora angu-3 ngosuku.
Izimpikiswano ezimbili ngosuku lwenhlanganisela efanayo kwi-plexus ye-solar, ngemuva, intamo, umgogodla kanye nezinyawo ezinyaweni.
isixazululi nkinga yehadiwe nezinsiza
Izosetshenziselwa ukuyeka kancane kancane.
• Staphysagria 15 CH: 5 igxuma ngosuku, ukukhulula ukukhungatheka.
• I-Nux vomica 15 CH ne-Ignatia 15 CH: I-5 igxila njalo ngosuku, ukunciphisa isimo sengqondo esibi.
• I-PC Sedative: I-5 igxuma izikhathi ezingu-3 6 ngosuku, ukuzolahla izinkinga nokulala.
• I-Caladium 5 CH, i-5 igxuma lapho ivuka futhi i-Tabacum 5 CH, i-5 i-granules ebusuku ukusiza umzimba ukuba ugxilise.
Yenza ukwelashwa kwe-1 ezinyangeni ze-2, bese ufaka isikhala.
Usuke usabela "Izitshalo ezintathu ukukuyeka ukubhema ..." Imizuzwana embalwa edlule
Siyabonga ngokwabelana! Phakathi kwezinye izindlela.
Ngiyabonga ngokwabelana! Ngomuthi waseChinese ,.
Siyabonga ngokwabelana! Iningi elikhulu.
Ngiyabonga ngokwabelana! Isibindi siyikho.